Siyakwamukela kuwebhusayithi yethu!
Iphrojekthi ye-Afrika - Eyabangenisa, Abasabalalisi kanye Nabadayisi Bezitolo Ezidayisa Izinto Ezitolo Ezitolo
Maphakathi noNovemba 2021, ukulayishwa kwemikhiqizo engu-#5, #8, kanye ne-#9 ekhiqizwe inkampani yethu kwaqedwa. Inqubo yayibushelelezi futhi izinzile, futhi inani leziqukathi lafinyelela izinga. Ngalesi sikhathi, umnyango wokuhlola ikhwalithi wenkampani yethu usebenzise ngokuqinile inspe ebanzi...
Amandla wempahla eluhlaza yakamuva
Namuhla i-LGLPAK LTD izokuyisa ekuqondeni imakethe yempahla eluhlaza: Isikhungo samandla adonsela phansi emakethe yepulasitiki ye-ABS sisesendleleni ebheke phansi. Abahwebi bayaqaphela ekuhwebeni. Izinhloso zokuthenga ezansi nomfula ezincane nezimaphakathi aziphezulu. Izintengo zemakethe yepulasitiki ye-PP zehle kancane, futhi ...
Ukuguquguquka kwentengo yemakethe ye-polyethylene kuyenyuka
Esimeni sakamuva senani likawoyela ongahluziwe, iMelika iphasise umthethosivivinywa wengqalasizinda ka-$1 trillion, izimpawu ezinhle zokukhula komnotho womhlaba zasekela isimo sokudingeka, futhi amanani kawoyela emhlabeni wonke aqhubeka nokukhuphuka. I-NYMEX crude oil futures 12 contract 81.93 ikhuphuke ngo-0.66...
Ungakhetha kanjani isikhwama se-roll nge-paper core noma ngaphandle?
Ezinye izikhwama eziginqayo zinengqikithi yephepha, kanti ezinye izikhwama ezigoqayo azinawo umgogodla wephepha. Uyini umehluko phakathi kwabo? Sikhetha kanjani? Eqinisweni, ukuthi akhona yini ama-paper cores wezikhwama ze-roll, umehluko kuphela ekwakhiweni, futhi alikho igebe ezintweni ezingavuthiwe kanye ...
Umshini wokupakisha wesikhwama sepulasitiki onelungelo lobunikazi be-LGLPAK LTD
Ngomhla zi-1 kuNovemba 2021, i-LGLPAK LTD yathola ngokusemthethweni isitifiketi selungelo lobunikazi somshini wokupakisha izikhwama zepulasitiki! Njengoba umshini wokupakisha owenziwe ngokuzimela yi-LGLPAK LTD wafakwa ekukhiqizweni ngoDisemba 2012, ngemuva kweminyaka ecishe ibe ngu-10 yokuhlola okuqhubekayo kanye nokuthuthuka...
Siyini isikhwama? Ngamafuphi, izikhwama zepulasitiki zixhunywe ngamunye ngamunye, zigoqwe zibe yinqwaba, futhi zidonswe ngobumnene ngokusho kwegebe elisikiwe lapho zisetshenziswa, isikhwama, esilungele ukugcinwa nokusetshenziswa. Esigabeni sokudla sezitolo ezinkulu, sivame ukubona imiqulu yepulasitiki...
Ukubaluleka Kokuphrinta Kwezikhwama Ze-Vest Eziphrintiwe
Ucabanga ukuthi iyini ingxenye eyinhloko yesikhwama sevesti esiphrintiwe? Ngaphandle kwemingcele evamile yezakhi ezihlukahlukene zomkhiqizo ngokwawo, into ebaluleke kakhulu ngokuqinisekile i-aesthetics yokunyathelisa kanye nekhwalithi yokunyathelisa. I-LGPAK LTD yenze en...
Umhlangano wokuhlaziya okhethekile wokulandelela i-oda
I-LGLPAK LTD ibilokhu ibheka ikhwalithi nenkonzo njengefilosofi ewumongo yenkampani. Sigcizelela ukuthi ukulawulwa kwekhwalithi yomkhiqizo kuwumongo wesisekelo senkampani. Ukuze kuthuthukiswe ikhwalithi yama-oda, i-Guangli Packaging Co., Ltd. isungule i-oda elikhethekile ...
I-LGLPAK LTD ihlela imisebenzi yeqembu!
Kusukela ngo-Okthoba 16 kuya ku-17, 2021, inkampani yahlela ukuphuma kweqembu kwezinsuku ezimbili e-Tai'an Sun Tribe nase-Underground Dragon Palace. Kulokhu bonke ozakwabo kanye nemindeni yabo babambe iqhaza ngenkuthalo, futhi wonke umuntu wayejabule kakhulu. Ngemuva komcimbi, siqoqe wonke umuntu ...
Kungani ukhethe i-LGLPAK LTD ukukhiqiza izikhwama ze-vesti eziphrintiwe?
Lapho amakhasimende amaningi ngokwengeziwe ekhetha ukusebenzisa izikhwama zezikibha eziphrintiwe, azokhetha abakhiqizi bezinto zokupakisha eziguquguqukayo zepulasitiki ukuze benze ngokwezifiso izikhwama zabo zezikibha eziphrintiwe. Lokhu akuqhubeki nesitayela sabo kuphela, kugcina ubunye bomkhiqizo, futhi kudala ukubonakala, kodwa futhi nokunaka kwabathengisi...
Indlela yokuxazulula ukugcwaliswa okunembayo okuphezulu
Ezindabeni ezimbili zokuqala, i-LGLPAK LTD ikunike ukuqonda kokuqala komshini wokushaja amanzi futhi yafunda ngendlela yokukhetha yomshini wokugcwalisa kanye nokugcinwa nokugcinwa komshini wakho ngesikhathi sokukhiqiza. Ngithemba ukuthi uzoqonda ukuthi ungafinyelela kanjani ukunemba okuphezulu ...
Izikhwama ze-T-Shirt eziphrintiwe
Izikhwama zezikibha nazo zinezihloko ezihlukene ezindaweni ezihlukene, njengezikhwama zevesti, izikhwama ezikahle, izikhwama zokukhangisa, njll. Kungesinye sezikhwama zepulasitiki ezivamile. Iqanjwe ngesimo sayo sifana nevest. Izikhwama ze-T-shirt zilula ukuzenza futhi zinezinhlobonhlobo zokusetshenziswa. Sebephenduke ababalulekile...